I-Wrike: Yandisa ukuvelisa, ukuBambisana, kunye nokuHlanganisa ukuPhuma kweMveliso | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 23, 2015 NgoMvulo, nge-7 kaDisemba ngo-2020 Douglas Karr
Andiqinisekanga ngento esinokuyenza ngaphandle kwe- iqonga lokusebenzisana kwimveliso yethu yomxholo. Njengoko sisebenza kwi-infographics, amaphepha amhlophe, kunye nakwizithuba zebhlog, inkqubo yethu isuka kubaphandi, kubabhali, kuyilo, kubahleli nakwabaxhasi bethu. Baninzi kakhulu abantu ababandakanyekayo ukugqithisa iifayile ngapha nangapha phakathi koGoogle amaXwebhu, iDropBox okanye i-imeyile. Sifuna iinkqubo kunye noguqulelo ukuze sityhalele phambili phambili kwiiprojekthi ezininzi eziqhubekayo.
Qhubeka yayakhelwe ngokukodwa ukusebenzisana nomxholo-usebenza njengeziko eliphambili lokulawula izibonelelo zakho zabasebenzi kunye nokudityaniswa neziseko zakho zangaphandle. Iimpawu zibandakanya:
Izabelo zomsebenzi Hlela yonke into oyifunayo ukuze ugqibezele iprojekthi yakho kwindawo enye. Yahlula iinjongo ezinkulu kwiziqwenga ezilawulekayo, fakela iifayile, kwaye usete imihla efanelekileyo. Landa ngokulula inkqubela phambili iyonke kunye negalelo lomntu ngamnye.
uqhagamshelwano - @mention abadlali beqela olifunayo ukuze bawenze umsebenzi kwaye baya kuwubona ngoko nangoko umyalezo wakho kwindawo yabo yokusebenza. Unokubandakanya abasebenzisi abavela ngaphandle kwenkampani yakho.
Imveliso ye-imeyile Unqakrazo olunye uguqula i-imeyile ibe ngumsebenzi kwaye uyithumele kwakhona kwi-Wrike ukuze yenze isenzo.
Iidashboard -Yila imibono enokwenziwa ngokwezifiso zeeprojekthi ezibaluleke kakhulu ezibandakanya iirafu, iimeko zomsebenzi, kunye nohlaziyo lwexesha lokwenyani.
Ukondla Iindaba -Uhlaziyo kuyo yonke imisebenzi yeprojekthi lubonelela ngeengxelo zobume obukhawulezileyo kunye nokusika iintlanganiso kunye nonxibelelwano nge-imeyile ngesiqingatha ukuze ukwazi ukugxila kwizinto ezibalulekileyo.
Ukuhlelwa kweqela -Hlela, yabelana kunye nokusebenzisana kumaxwebhu akwi-intanethi nangexesha lokwenyani neqela lakho.
Ukulawulwa kokuLawulwa -Ukunika inqanaba elifanelekileyo lolawulo lokufikelela, ukudala amaqela abasebenzisi abawasebenzisayo kunye nokwabelana ngokukhetha iifayile kuqinisekisa ukuba abantu abafanelekileyo bafumana ulwazi abaludingayo ukuze basebenze.
Ukuhamba komsebenzi ngokwesiko -Yenza lula inkqubo yakho kwaye ufumane ukubonakala emsebenzini kwinqanaba ngalinye. Yenza eyakho inkqubela yokuhamba komsebenzi kunye neenkqubo zokuvunywa.
Imihlaba yesiqhelo - Yongeza amasimi akho esiko kuyo nayiphi na iprojekthi okanye umsebenzi kwaye ulandele ngokuthe ngqo okubalulekileyo kwishishini lakho.
Ulawulo lweMithombo Izixhobo zokulinganisa kunye nokulandela umkhondo ngokusebenza kwetshathi yokutsha.
Ukulandelela ixesha -Gcina umkhondo wendlela ixesha elichithwa yiprojekthi okanye lilungu leqela kucwangciso oluchanekileyo nolawulo lohlahlo-lwabiwo mali.
Ukuhlanganiswa kweKhalenda -Ngqamanisa imisebenzi kunye neeprojekthi zembali kuyo nayiphi na ikhalenda kubandakanya iKhalenda kaGoogle, iKhalenda ye-Outlook, kunye neKhalenda.
Izicelo zefowuni - Qhubeka ineZicelo zombini ze-Android kunye ne-iOS ukuze ugcine umkhondo kwaye wenze imisebenzi nokuba ukude edesikeni yakho.
Ukuqhubela phambili imveliso yakho, unokukhuphela iphrojekthi, ukope imisebenzi oyabelweyo kunye nemihla.
I-Wrike ikwabonelela ngokudityaniswa neGoogle Apps, iChannel, iDropbox, ibhokisi, iMicrosoft Project, iMicrosoft Excel, iMicrosoft OneDrive, iSAML, iSalesforce, iCal, iZapier, iEvernote, iWufoo, iHipChat, iWordPress, iSlack (esiyithandayo), iZendesk, Hubspot, Iincwadi ezikhawulezayo, i-LinkedIn, i-Marketo, i-ProofHQ, i-Harvest, i-SurveyMonkey, i-Okta kunye neBitium!
Bhalisela uvavanyo lwasimahla kwiWike
Inqaku nje-sisebenzisa amakhonkco obulungu ngaphakathi kweli nqaku.
tags: ibitiumIbhokisichromeukusebenzisana nomxholoimveliso umxholoimisebenzi yesiqulathoukuhamba komsebenziukuhamba komsebenziibhokisi lehlayovernoteiGoogle appsUkuvunwaI-Hipchathubspotboku-LinkedInuphawuMicrosoft ExcelMicrosoft OneDriveProject MicrosoftoktaubungqinaIincwadi ezikhawulezayoukuthengisaI-SAMLMusaSurveyMonkeyWordPressWrikewuuuzapperzendesk
Amashishini ama-5 aguqulwe ngokugqibeleleyo yi-Intanethi